MATIU 19 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAT 19)
Mgbe Jisọs kwusịrị okwu ndị a, ọ hapụrụ Galili gaa na mpaghara Judia, nke dị ma a gafee osimiri Jọdan.
Igwe mmadụ dị ukwuu sooro ya. Ọ gwọkwara ndị ahụ na-esighị ike nꞌetiti ha.
Ụfọdụ ndị Farisii bịakwutere ya jụọ ya ajụjụ iji ịnwa ya sị, “O ziri ezi nꞌiwu na nwoke ga-agbara nwụnye ya achọkwaghị m nꞌihi ihe ọ bụla?”
Jisọs zara ha sị, “Ọ̀ bụ na unu adịghị agụ akwụkwọ nsọ? Nꞌime ya ka e dere sị, ‘Onye kere ha na mbụ kere ha nwoke na nwanyị.
Jisọs zara sị ha, “Ọ bụghị mmadụ nile ga-anagide okwu a. Nanị ndị Chineke nyere ike ime ya ga-anagide ya.
Ma Jisọs sịrị ha, “Kweenụ ka ụmụntakịrị bịakwute m, unu egbochikwala ha. Nꞌihi na alaeze eluigwe bụ nke ndị dị otu a.”
Jisọs bikwasịrị ha aka nꞌisi gọzie ha nile tupuu ọ hapụ ha pụọ.
Otu nwoke bịakwutere Jisọs jụọ ya ajụjụ sị, “Ezi onye ozizi, gịnị ka m ga-eme ka m keta ndụ ebighị ebi?”
Jisọs zara sị ya, “Gịnị mere i ji na-ajụ m ajụjụ banyere ihe ziri ezi? Ọ bụ nanị Chineke bụ ezi onye. Ọ bụrụ na ị chọrọ iketa alaeze eluigwe gaa debe iwu nile Chineke nyere.”
Nwoke ahụ sịrị ya, “Iwu ndị a ka m deberela siterị na mgbe m dị na nwanta. Gịnị ọzọ fọdụụrụ m ime?”
Jisọs zara sị ya, “Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye zuru oke nꞌezie, laa nꞌụlọ gị ree ihe nile i nwere. Nyekwa ndị ogbenye ego i retara. Ị ga-enwe akụ na ụba nꞌeluigwe. Bịakwa soro m.”
Mgbe nwoke ahụ nụrụ ihe Jisọs kwuru, ọ lara na mwute, nꞌihi na ọ bụ ọgaranya.
Mgbe ahụ Jisọs gwara ndị na-eso ụzọ ya okwu sị, “Ọ bụ nnọọ ihe siri ike na onye ọgaranya ga-abanye nꞌalaeze Chineke.
Mgbe ahụ Pita jụrụ ya sị, “Lee, anyị ahapụla ihe nile soro gị, gịnị ga-abụ ụgwọ ọrụ anyị?”
Jisọs zara sị ya, “Mgbe mụ bụ nwa nke mmadụ ga-anọkwasị nꞌelu ocheeze ebube m, nꞌalaeze ahụ, nꞌezie, unu bụ ndị na-eso ụzọ m ga-anọkwasị nꞌelu ocheeze iri na abụọ ahụ, na-ekpe ebo iri na abụọ Izirel ikpe.
Ma ọtụtụ ndị bu ụzọ bido ugbu a, ga-abụ ndị ikpeazụ.”